Tonga ny farany, fametraham-pialana sy fifidianana… | NewsMada
Tonga ny farany, fametraham-pialana sy fifidianana…
Tsy matoky tena amin’izao fifidianana efa antomotra sy tsy miverin-dalana izao? Na tsy mahafoy ny fahefam-panjakana tsy maintsy ilaozana, na te hanilika ny paipaika politika maloto hoe ataon’ny hafa na ny tena aza no be kajikajy amin’izany…
Amin’izao, mandeha ny resaka fa mety hahemotra ny fifidianana. Tsy inona fa noho ny antony tsy fantatra, tsy sahy lazaina sy tsy hay hazavaina. Tsy mitombina fa na ny tena aza, tsy resy lahatra? Vokany, lasa tsaho ho azy ny raharaha, manakorontana…
Amin’izany, atao ihany ny atao amin’ny hoe fiatrehana fifidianana: fiomanana sy fakana bahana mialoha ny tena fampielezan-kevitra. Famitaham-bahoaka? Na famitahan-tena… Tahotra ny fitsaram-bahoaka amin’ny fandatsaham-bato fa tsy inona.
Tsy nahomby ny kajikajy sy paipaika politika hijanona eo amin’ny fitondrana faran’izay ela, araka izay azo atao? Fitetehana hanao fitsapan-kevi-bahoaka hanitsiana ny lalàmpanorenana, ny lalàm-pifidianana saika natao amin’izay mahametimety ny tena…
Inona ny hitranga, raha tsy tanteraka amin’ny 7 novambra ny fifidianana? Ny amisavisana ny ratsy, hiavian’ny soa: fahadisoam-panantenana, fifanomezan-tsiny… Ho korontana aza fa hahazo vahana ho azy ny tsy fanarahan-dalàna, fanararaotana… Zava-doza!
Amin’izany, ny be kajikajy sy tetika hanemorana ny fifidianana sy manakorontana izany tsy ho tanteraka no hiseho handamina, handray andraikitra… Fitaka bevava. Politika io, ady fahefana sy tombontsoa. Nefa arakaraka ny fifandanjan-kery ihany.
Ho azo na ho voafitaka amin’izay hoe fihemorana na fanemorana ny fifidianana izay ve ny vahoaka? Izay tsy sahy miatrika azy amin’ny alalan’ny latsa-bato hitsarany ny mpanao politika, nefa te hahazo fitondrana, ihany no tena manakorontana?
Ho hita eo, raha tena misy ny fanajana sy fampiharana lalàna: fametraham-pialana, firosoana amin’ny fifidianana… Ho vita ihany fa tsy azo ihodivirana? Takina koa ny fampielezan-kevitra tsy hampiasana fahefam-panjakana, ho marina, hadio…